Kwichina HRC55 Carbide 3 Flute Long Length Mills for manufacturers Aluminium kunye nabathengisi | Mingtaishun
I-HRC55 Carbide 3 Flute Ubude obude beeMill zeAluminiyam
Izinto zokwenza imveliso: Sebenzisa i-ZK30UF ngomxholo we-10% Co kunye nobungakanani beenkozo eziyi-0.6um. Iifluti: Iifili ezi-3, ngokufanelekileyo ukunciphisa ukungcangcazela nokusika okuzinzileyo
Ububanzi Ukusika ubude Ububanzi beShank Ubude ngokubanzi Iimbande
Ngenjongo "yesiphene zero". Ukukhathalela okusingqongileyo, kunye nembuyekezo kwezentlalo, ukukhathalela uxanduva lwabasebenzi kwezentlalo njengomsebenzi wabo. Samkela izihlobo ezivela kwihlabathi liphela ukuba zisindwendwele kwaye zisikhokele ukuze sikwazi ukufikelela kwiinjongo zokuphumelela kunye.
Ngazo zonke ezi nkxaso, sinokusebenzela wonke umthengi ngemveliso esemgangathweni kunye nokuhambisa ngexesha elifanelekileyo ngoxanduva olukhulu. Ukuba yinkampani esakhulayo esincinci, sisenokungabi yeyona ilungileyo, kodwa sizama konke okusemandleni ethu ukuba liqabane lakho elifanelekileyo.
Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi basekhaya nakwamanye amazwe ukuba batyelele inkampani yethu kwaye bathethe ngeshishini. Inkampani yethu ihlala inyanzelisa umgaqo "wobulunga obulungileyo, ixabiso elifanelekileyo, inkonzo yokuqala". Sizimisele ukwakha ixesha elide, ubuhlobo kunye nolwalamano macala kunye nawe.
Umsebenzi wethu "kukubonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa kunye namaxabiso afanelekileyo". Samkela abathengi kuzo zonke iimbombo zehlabathi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane beshishini kwixesha elizayo kunye nokufezekisa impumelelo efanayo!
Egqithileyo I-HRC60 Carbide 2 Flute Micro End Mill
Okulandelayo: I-55 ye-HRC 2 Iimbande zentsimbi yeempumlo zeMpumlo